पोखरामा पर्यटकको घुईचो ! राधाले गरिन् पोखराको आकाशमा नै यस्तो रमाईलो - Enepalese.com
पोखरामा पर्यटकको घुईचो ! राधाले गरिन् पोखराको आकाशमा नै यस्तो रमाईलो
इनेप्लिज २०७५ कार्तिक १९ गते १२:२१ मा प्रकाशित
पोखरामा यतिबेला अन्तरीक पर्यटकको घुईचो लागेको छ । पोखराका विभिन्न पर्यटकीय ठाउँमा प्राय घुईचोनै देखिन्छ । विशेषगरि पोखराको आकाशमा उड्न देशका विभिन्न ठाउँबाट पोखरामा पर्यटक आउने गर्दछन् ।
यस्तै पोखरा हुदै कयौँ पटक काठ्माण्डौ पुगेकी राधा ढकाल यसपटक पोखराको आकाशमा प्याराग्लाईडिङको अनुभव बटुलीन् ।
उनले पोखराको आकाशमा उड्दा खुबै रमाईलो लागेको बताईन् । उनले भनिन् पोखरा हुदै विभिन्न ठाउँमा गइएको थियो तल बसबाट आकाशमा हेर्दै धेरै पटक हिडियो तर आज पहिलो पटक पोखराको आकाशमा प्याराग्लाईडिङ गर्दा छुट्टै मज्जा आएको बताईन् ।